အောက်တိုဘာ 1910 ။
HW PERCIVAL နေဖြင့်မူပိုင်ခွင့်, 1910 ။
ဘာကြောင့်မြွေကိုလူအများစုကကွဲပြားစွာမှတ်ယူကြတာလဲ။ တခါတရံမြွေသည်မကောင်းမှုကိုကိုယ်စားပြုသူ၊ အခြားအချိန်များတွင်မူဥာဏ်ပညာ၏သင်္ကေတအဖြစ်ပြောကြသည်။ လူသည်အဘယ်ကြောင့်မြွေများကိုဤမျှပင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုပိုင်ဆိုင်သနည်း။
ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်မှုသည်လူသည်မြွေများနှင့်အခြားသတ္တဝါအားလုံးကိုမည်သို့ဆက်ဆံသည်နှင့်များစွာသက်ဆိုင်သည်။ သို့သော်သူကိုယ်တိုင်၌သူ၏ပညာရေးမှအပကျန်အရာများသည်ပညာရေးဖြစ်သည်။ မြွေကိုအဆိပ်အပြင်းနှင့်မကောင်းသောအရာ (သို့) ဉာဏ်ပညာ၏သင်္ကေတအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဒါဟာယူသောရှုထောင့်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အချို့မြွေများကျွေးသောအဆိပ်ကိုဖျက်စီးခြင်း မှလွဲ၍ မြွေသည်လူနှင့်ကမ္ဘာကိုအထူးအကျိုးပြုသည်ဖြစ်စေ၊ အခြားသတ္တဝါများထက် ပို၍ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအကျင့်များကိုပြသသည်ဖြစ်စေ၊ တိရိစ္ဆာန်ပုံစံများ။ ဆန့်ကျင်တွင်သူတို့သည်တစ်ခါတစ်ရံနားမကြားသူများ၊ သူတို့ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အန္တရာယ်ကင်းအောင်မလုပ်နိူင်တဲ့အထိနက်ရှိုင်းစွာ ၀ င်ရောက်နိုင်တဲ့အတွက်မြွေအချို့ကိုက်ခြင်းသည်သေစေလောက်သောကြောင့်သားကောင်ကိုကိုက်ပြီးမကြာမီမှာပင်သေခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သို့သော်အန္တရာယ်ကင်းသောမြွေများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်သာရှိပြီးမြွေ၏လှုပ်ရှားမှုသည်သက်တမ်းအရင့်ဆုံးနှင့်အလျင်မြန်ဆုံးသတ္တဝါများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
မြွေကိုပညာ၏သင်္ကေတဟုခေါ်ဆိုရသည့်အကြောင်းရင်းများစွာရှိသည်။ မြွေသည်မည်သည့်သတ္တ ၀ ါထက်မဆိုသာလွန်သည်။ လူသားသည်မိမိကိုယ်ကိုခံယူရန်အဆင်သင့်ဖြစ်စေသောအခါစွမ်းအားသည်လူတို့အားဉာဏ်ပညာပေးသောစကြဝuniverseာ၏လျှပ်စစ်စွမ်းအားနှင့်ဆက်စပ်နေပြီးရွေ့လျားနေသည်။ လူသား၏လက်ရှိအခြေအနေတွင်သူသည်မသင့်တော်သောကြောင့်သူမှတစ်ဆင့်ထိုစွမ်းအားကိုတိုက်ရိုက်မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ မြွေ၏သက်ရှိသည်ဤလျှပ်စစ်စွမ်းအား၏တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်မှုကိုခွင့်ပြုရန်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်းတန်ခိုးသည်မြွေကိုမပေး။ မြွေ၏ခန္ဓာကိုယ်မှသာပြုမူသည်။ ဉာဏ်ပညာကိုအသုံးချရန်နှင့်သတိရှိရန်စိတ်တစ်ခုသည်လိုအပ်သည်။ ဒီမြွေမှာမရှိဘူး။ မြွေသည်အများဆုံးနှင့်စီးပွားရေးအရကျောရိုးရှိသတ္တဝါဖြစ်သည်။ အဆိုပါကျောရိုးကော်လံမြွေတစ်လျှောက်လုံးပြေး, ထိုသို့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြုမူသောမှတဆင့်ကျောရိုးကော်လံဖြစ်ပါတယ်။ လူ၏ကျောရိုးကော်လံသည်မြွေပုံစံဖြစ်သည်၊ သို့သော်လူ၏ကျောရိုးသည်လျှပ်စစ်အားတိုက်ရိုက်စီးဆင်းစေရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်သောကြောင့်လက်ရှိနဗ်ကြောကော်လံမှနဗ်ကြောအားအသုံးပြုနေသည့်လက်ရှိအသုံးအနှုန်းများကြောင့်ကျောရိုးကော်လံမှပိတ်ထားသည်။ ကျောရိုးကနေထွက်စိမျးခန္ဓာကိုယ်ထားနေကြသည်။ လက်ရှိအာရုံကြောများနှင့်အာရုံကြောစီးဆင်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စကြာ ၀ electricalာရှိလျှပ်စစ်စွမ်းအားကိုခန္ဓာကိုယ်မှတိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်လူတို့၏စိတ်ကိုအလင်းပေးခြင်းမှတားဆီးပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ်၏ဝမ်းဗိုက်နှင့်တင်ပါးဆုံတွင်းဒေသများရှိအာရုံကြောများသည်မြွေနှင့်တူသည်။ ဤအာရုံကြောများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အင်္ဂါများကိုသူတို့၏စွမ်းအားကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ အရှေ့စာအုပ်များတွင်မြွေစွမ်းအားဖြစ်သော kundalini သည်ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်း၌အိပ်ပျော်နေသည်ဟုဆိုထားသည်။ သို့သော်ဤမြွေစွမ်းအားနိုးသောအခါလူ၏စိတ်ကိုလင်းစေလိမ့်မည်။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရဆိုလိုသည်မှာယခုအသုံးမပြုရသေးသောသို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားပြုထားသောကိုယ်ခန္ဓာ၏အချို့သောအာရုံကြောစီးဆင်းမှုများကို၎င်းတို့၏သင့်လျော်သောလုပ်ဆောင်မှုသို့ခေါ်ဆောင်ရမည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဆိုလိုတာကသူတို့ကကျောရိုးနဲ့ချိတ်ဆက်လိမ့်မယ်။ ဤသို့ပြုခြင်းသည်လျှပ်စစ် switchboard ပေါ်ရှိသော့ကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်တူသည်။ ၎င်းသည် current ကိုလှည့်ပြီးစက်များကိုလည်ပတ်စေသည်။ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းဖွင့်ပြီးလူ၏ခန္ဓာကိုယ်ရှိကျောရိုးနှင့်ဆက်စပ်သောအခါလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုဖွင့်သည်။ ၎င်းသည်ပထမဆုံးသောခန္ဓာကိုယ်၏အာရုံကြောများမှတဆင့်ပြုမူသည်။ အကယ်၍ ကိုယ်ခန္ဓာ၏ ဦး နှောက်အာရုံကြောအဖွဲ့အစည်းသည်မခိုင်မာပါကလက်ရှိလိုက်လျောညီထွေမှုရှိပါကအာရုံကြောများကိုလောင်ကျွမ်းစေသည်။ မသန်စွမ်းမှုအရ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အားအနာရောဂါဖြစ်စေသော၊ အကယ်၍ ဦး နှောက်အာရုံကြောအဖွဲ့အစည်းသည်အင်အားနှင့်ကိုက်ညီပါက၎င်းသည် astral ပုံစံခန္ဓာကိုယ်ကိုလျှပ်စစ်ထုတ်လွှတ်ပြီးစိတ်ကိုရှင်းလင်းစေပြီးထွန်းလင်းပေးသည်။ သို့မှသာရုပ်ဝတ္ထုကမ္ဘာသို့မဟုတ်နက္ခတ္တဗေဒနှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်အကြောင်းအရာနှင့်မဆိုစိတ်ထဲတွင်ချက်ချင်းသိနိုင်သည်။ ဤစွမ်းအားသည်မြွေ၏လှုပ်ရှားမှုကိုရှိပြီး၎င်းသည်ကျောရိုးကော်လံအတွင်းရှိကျောရိုးမှတဆင့်ပြုမူသည်။ ၎င်းသည်မြွေ၏ပုံစံဖြစ်သည်။ မြွေကဲ့သို့ပင်တန်ခိုးသည်၎င်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိသူအားသေစေလိမ့်မည်။ မြွေကဲ့သို့ပင်စွမ်းအင်သည်ကိုယ်ခန္ဓာအသစ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးမြွေသည်အသားအရေကိုသုတ်လိမ်းသည့်အခါ၎င်းသည်အဟောင်းကိုသုတ်လိုက်သည်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိတိရိစ္ဆာန်များသည်သီးခြားသီးခြားဖြစ်သောလူသားတို့၏စိတ်ဆန္ဒဖြစ်သောကြောင့်လူကိုကြောက်ရွံ့သောတိရစ္ဆာန်သည်မိမိအလိုရှိသည့်အထူးအလိုအလျောက်ပုံစံကိုပြသသောကြောင့်၊ သူသည်ကျွမ်းကျင်ပြီးထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အခါလူသည်တိရစ္ဆာန်ကိုမကြောက်ဘဲတိရစ္ဆာန်သည်လူကိုကြောက်။ အန္တရာယ်မပြုနိုင်ပါ။ လူသည်မြွေကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်မိမိအားကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောကြောင့်မြွေ၏ကိုယ်စားစွမ်းအားကိုမထိန်းချုပ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်မြွေသည်လူကိုကြောက်ရွံ့သော်လည်းဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ ဉာဏ်ပညာ၏အကြံအစည်သည်လည်းလူကိုဆွဲဆောင်သည်။ သို့သော်သူသည်ဉာဏ်ပညာမရရှိမီကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်အမှန်တရားကိုချစ်မြတ်နိုးရမည်။ ၎င်းသည်မြွေကဲ့သို့သောတန်ခိုးကဲ့သို့၎င်းကိုဖျက်ဆီးခြင်းသို့မဟုတ်အရူးလုပ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
အဆိုပါ Rosicrucians အစဉ်အဆက်မီးခွက်ကိုမီးရှို့သောပုံပြင်များအတွက်မဆိုအမှန်တရားရှိပါသလား? ဒါကြောင့်ဆိုပါကမည်ကဲ့သို့သူတို့လုပ်ခဲ့ကြသည်, အဘယ်အရာကိုရည်ရွယ်ချက်သူတို့အစေခံခဲ့သလဲ, အခုသူတို့ လုပ်. အသုံးပြုနိုင်သလဲ
Rosicrucians (သို့) အခြား mediaeval အလောင်းတွေကိုမီးမရှို့ခင်ကမီးမရှို့သင့်တဲ့ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိပါဘူး။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အစဉ်အမြဲမီးလောင်နေသောမီးခွက်များသည်အဖန်တလဲလဲတီထွင်သောဒဏ္thာရီတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်ရခြင်း၏အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာမီးအိမ်သည်မီးခိုးငွေ့များကဲ့သို့သောမီးခိုးများ၊ ရေနံကဲ့သို့သောဓာတ်ငွေ့ကိုအသုံးပြုရမည်ဟူသောကျွန်ုပ်တို့၏ယူဆချက်များကြောင့်ဖြစ်သည် , သို့မဟုတ်သောလျှပ်စစ်စီးကြောင်းဖြတ်သန်းနှင့်ဝိုင်ယာကြိုးများ၏ incandescence အားဖြင့်အလင်းပေးသောမှတဆင့်။ ဆီမီးခွက်၏အကြံဥာဏ်မှာအလင်းပေးသောအရာဖြစ်သည်။
Rosicrucians ၏အစဉ်အဆက်မီးလောင်သောမီးခွက်သည်အကြောင်းပြချက်မရှိဟုထင်ရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆီမီးခွက်သို့မဟုတ်၎င်းကိုထောက်ပံ့သောအရာတစ်ခုခုမပါဘဲမီးကိုအလင်းမပေးနိုင်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မီးလောင်နေသောမီးခွက်သည် Rosicrucian နှင့် mediaeval ခေတ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ထုံးတမ်းစဉ်လာများ၌များပြားလှသောဖြစ်နိုင်ချေများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယူဆကြသည်။
Rosicrucian (သို့) လူလတ်ပိုင်းအရွယ်လူအချို့ကအမြဲတမ်းလောင်ကျွမ်းသောမီးခွက်ကိုမည်သို့လုပ်ခဲ့သည်ကိုယခုကျွန်ုပ်တို့မပြောနိုင်ပါ။ သို့သော်ထိုမီးခွက်ကိုပြုလုပ်နိုင်သည့်မူကိုရှင်းပြနိုင်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်မီးလောင်နေသောဆီမီးသည်ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်အခြားမည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆို အသုံးပြု၍ စက်ပစ္စည်းများဖြင့်မသုံးကြောင်းနားလည်ထားပါ။ အစဉ်အမြဲလောင်ကျွမ်းသောမီးခွက်၏ကိုယ်ထည်နှင့်ပုံစံသည်ထိုမီးခွက်ကိုသူစိတ်စွဲမှတ်။ ပြုလုပ်သောအရာများအသုံးပြုရန်သင့်လျော်သောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဆီမီးခွက်၏အရေးကြီးသောအပိုင်းမှာအလင်းပေးထားသောပစ္စည်းဖြစ်သည်။ အလင်းသည်အီသို့မဟုတ်အာကာသအလင်းမှဖြစ်ပေါ်သည်။ ၎င်းသည်လောင်ကျွမ်းသောဖြစ်စဉ်မှထုတ်လုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ အလင်းကိုလှုံ့ဆော်ရန်အသုံးပြုသောပစ္စည်းကိုဂရုတစိုက် ပြင်ဆင်၍ ချိန်ညှိရမည်သို့မဟုတ်အီသာသို့မဟုတ်နက္ခတ္တဗေဒအလင်းနှင့်လိုက်ဖက်ညီရမည်။ ဤပစ္စည်း၏ပြင်ဆင်မှုနှင့်၎င်းကိုအီသို့မဟုတ်နက္ခတ္တဗေဒအလင်းဖြင့်ညှိခြင်းနှင့်ညှိခြင်းသည် Rosicrucians နှင့် Fire Philosophers တို့၏လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအရာအားလုံးဖြစ်နိုင်သည်ကိုယခု radium ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းဖြင့်သရုပ်ပြသည်။ ရေဒီယမ်သည်မိမိကိုယ်ကိုမစားပဲပမာဏအနည်းငယ်ကျဆင်းခြင်းမရှိဘဲအလင်းကိုပေးပုံရသည်။ ရေဒီယမ်သည်ထင်မြင်ချက်အရသူ့ဟာသူအလင်းရောင်မရရှိပါ။ အလင်းကို radium မှသွေးဆောင်သည်။ radium မှထုတ်လွှတ်လိုက်သောအလင်းသည်အီသာသို့မဟုတ်အလင်းမှလာသည်။ ရေဒီယမ်သည်အလင်းကိုနက္ခတ္တဗေဒလောကမှယူဆောင်လာပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံသို့ပြသသည့်ကြားခံတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
ရေဒီယို မှလွဲ၍ အခြားအရာဝတ္ထုများရှိနေသောကြောင့်၎င်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်နိုင်ပြီးရေဒီယမ်ထက်မတူညီသောအရာများဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသော်လည်းရိုစီကူစီယန်လူမျိုးများမီးတောက်လောင်နေသောမီးခွက်များမှတစ်ဆင့်ဆင်တူသောစည်းမျဉ်းများကိုစီစဉ်ခဲ့သည်။ အီသို့မဟုတ်နက္ခတ်တာရာကမ္ဘာမှရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာ၌ထင်ရှားစေနိုင်သည်။
အစဉ်အမြဲမီးလောင်သောမီးခွက်များသည်များစွာသောရည်ရွယ်ချက်နှင့်မတူကွဲပြားစွာတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက်ဆောက်လုပ်ထားသောဆီမီးသည်အစဉ်အမြဲမီးလောင်စေသောမီးလုံးများကိုအသုံးပြုရန်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်ဥပမာအားဖြင့်ရေဒီယမ်သည်အလင်းကိုပေးသည်။ သို့သော်၎င်းကိုထိုသို့အသုံးပြုရန်အတွက်၎င်းကိုပြင်ဆင်ခြင်းသည်အလွန်ကုန်ကျသည်သာမကသတ္တဝါများအနီးရှိအလင်းရောင်ဖြာထွက်သောရောင်ခြည်ကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုရေဒီယမ်ကိုအလင်းအတွက်အသုံးမပြုပါ။
အစဉ်အမြဲမီးလောင်စေသောမီးချောင်းများကို အသုံးပြု၍ အသုံးပြုနိုင်သောရည်ရွယ်ချက်အချို့ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည် - လျှို့ဝှက်အစည်းအဝေးများတွင်အလင်းပေးရန်၊ နက္ခတ်ဗေဒင်ကမ္ဘာနှင့်၎င်း၏အချို့သောအရာများကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်၊ လုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆန့်ကျင်။ ရသောအလုပ်နှင့်ဆန့်ကျင်သောဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကိုရှောင်ရှားရန်၊ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်နက္ခတ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအိပ်ချိန်အတွင်း (သို့) ခံတွင်းထဲရှိနေစဉ်ကာကွယ်ရန်၊ transmutation အတွက်သတ္တုများအတွက်ကုသမှုနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်၊ ဥပမာအချို့ဆေးဝါးများကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျိန်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏အာရုံကိုမမြင်ရသောနက္ခတ်ဗေဒင်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်နက္ခတ်ဗေဒင်သို့မဟုတ်အတွင်းပိုင်းအာရုံများကိုချိန်ညှိရန်။
အခြားအစဉ်အမြဲမီးလောင်သောမီးခွက်များကိုယခုပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့ကိုနောင်တွင်လုပ်ကောင်းလုပ်နိုင်သော်လည်း၎င်းကိုယခုအသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းတို့သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်နက္ခတ်ဗေဒင်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအလုပ်အတွက်အချိန်လွန်သွားပြီ။ လူတို့၏စိတ်သည်ထိုသို့သောအကျင့်များမှကြီးထွားလာသင့်သည်။ နက္ခတ်တာရာဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသောအရာသည်ယခုလူ၏ကိုယ်ခန္ဓာမှပေးသောအရာအပြင်စိတ်နှင့်အခြားနည်းလမ်းများမရှိဘဲယခုထိန်းချုပ်သင့်သည်။ စိတ်ကိုသူ့ဟာသူတစ် ဦး အလင်းဖြစ်သင့်သည်။ ၎င်း၏ခန္ဓာကိုယ်သည်မီးခွက်ဖြစ်သင့်သည်။ လူသည်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကို ပြင်ဆင်၍ ၎င်းကိုစိတ်ကိုထိန်းချုပ်ရန်ယူဆောင်လာသင့်သည်။ စိတ်ကို၎င်းမှတစ်ဆင့်ထွန်းလင်း။ ပတ်ဝန်းကျင်ကမ္ဘာကိုထွန်းလင်းစေလိမ့်မည်။ ထာဝရမီးထွန်းသောမီးခွက်ကိုမြင်သူတိုင်းသည်အလင်းကိုအချိန်အတော်ကြာဖြာထွက်စေလိမ့်မည်။